News – ရွှေနိုင်ငံအရှေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(၁၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး (14th Annual General Meeting) အား online စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
November 28, 2020Announcements
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရခြင်းအတွက် အမှာစကား
November 23, 2018Announcements
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ယခင် ၁၉၄၇ အက်ဥပဒေအဟောင်းအား အစားထိုး ပြင်ဆင်လိုက်သည့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၆)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဤဥပဒေသစ်ကို ၂ဝ၁၈၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ စတင်အာဏာ သက်ရောက်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ များ ဥပဒေအသစ်ကြီး သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်တကွ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး မဖြစ်စေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် တစ်ဘက်တွင် ဖြေလျော့ထားပြီး၊ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း ...
January 3, 2017Investment
ယခုအခါ ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလီမိတက်တွင် အစုရှယ်ယာရှင် ၆၅၆ ဦးရှိပြီး (က) အစု ရှယ်ယာ (၈)ဦး အစု(၅၃၂၃၅)နှင့် (ခ)အစုရှယ်ယာ ရှင် (၆၄၈)ဦး၏ အစု (၃၄၆၆၀၃) အစုအရေ အတွက် (၃၉၉၈၃၈) စု – တန်ဘိုး အားဖြင့် ငွေကျပ် ၃,၉၉၈,၃၈၀,၀၀၀ိ/- ကို မတည်ရင်းနှီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ...
မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်) ပတ်ဘလစ်လီမိတက် (MTSH)တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သီလဝါအထူး စီးပွားရေးဇုန်တည် ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက် ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်) ပတ်ဘလစ်လီမိတက် (MTSH)တွင် စတင်တည်ထောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခု အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ ၏ ပိုင်ဆိုင်ရင်းနှီးငွေအနက် မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်) ပတ်ဘလစ် လီမိတက်သို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုငွေ ကျပ်သိန်း ၁၉၅၀၀ အားထည့်ဝင်ခဲ့ရာအစုရှယ်ယာပါဝင်မှု ၅% ဖြစ်ပြီး အခြားအများပိုင်ကုမ္ပဏီ (၈) ခု အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ...
မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ်လီမိတက် (Myanmar Agro Exchange Public Limited) ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ် – ၁၇၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ (ရက) (၁၄-၉-၂၀၁၅) ဖြင့် အများနှင့်သတ်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး မြန်မာအက် ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ် လီမိတက်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အကျိုးပြုရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တောင်သူ လယ် သမား၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူထုတ်လုပ်သူများ၊ ဝယ်ယူစားသုံးသူများ၊ လက်လီလက်ကားရောင်းချသူများ၊ ပြည်ပ တင်ပို့သူများအား ...
Myanmar National Telecom Holdings Public Ltd (MNTH) တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
နိုင်ငံတော်၏ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည့် MNTH အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွင် MNTH အနေဖြင့် စုစုပေါင်း (၂၃%) Star High Public Co မှ (၂၈%) နှင့် ဗီယက်နမ် Vietel Group မှ (၄၉%) ပါဝင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပြီး GLAD အနေဖြင့် အောက်ပါကုမ္ပဏီ (၁၀)ခုနှင့်အတူပူးပေါင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်ရန်၊ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအနေဖြင့် USD ၁၀၀၀၀၀ အား ၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့ပြုလုပ်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၄/၂၀၁၅ မှ ...
ကာလတို အကျိုးတူ ကုန်သွယ်မှု
ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက်သည် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများနှင့် ကာလတို အကျိုးတူ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော ပြည်တွင်း ပြည်ပဆန်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓါတ် မြေဩဇာတင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါသည်။ – အောင်နိုင်သစ္စာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် – Myanmar ACME Co.,Ltd. – City View Real Estate Co.,Ltd. – မေလင်းဖက်ရှင် နှင့် ဆန်းသစ်လွင် အပ်ချုပ်လုပ်ငန်း – ...